तीर्थ लामाले शिव हुमागाइको गुण तिर्लान् ! – मिलिजुली खबर
तीर्थ लामाले शिव हुमागाइको गुण तिर्लान् !
काभ्रे काँग्रेसका नेता शिव हुमागाईले केन्द्रीय कार्य समितिको सह महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ । १४ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै हुमागाईले आफ्नो उम्मेदवारी घोषण गर्नुभएको हो ।
हुमागाईको उम्मेदवार लगत्तै काभ्रे काँग्रेसका नवनिर्वाचित जिल्ला सभापति तीर्थ लामाले सहमतिको बुदाँ पक्कै पनि हेरे होलान् । १४ जिल्ला अधिवेशनमा गुट, गुट बीचको भिडन्त निकै रोचक बनेको थियो । अर्थात एउटै पार्टीमा पनि फरक पार्टीको अभ्यास भएको थियो ।
जिल्ला सभापतिमा तीर्थको उम्मेदवारी घोषणा अघि सभापति शेर बहादुर देउवाको निवास बुढालिकण्डमा तीर्थ र शिव बीच गोप्य सहमति भएको बताइएको छ । सहमतिमा कुन कुन कुरा समेटिएको छ भन्ने कुरा त दुबैले बाहिर ल्याइसकेका छ्रैनन् । तर जिल्ला सभापतिमा तीर्थलाई शिवले र केन्द्रीय सह महामन्त्रीमा शिवलाई तीर्थले सहयोग गर्ने सहमति भएको कुरा भने यी दुबै खेमाले भन्दै आएका छन् ।
त्यसो हो भने अब शिवलाई सह महामन्त्रीमा जसरी पनि जिताउनु पर्ने जिम्मेवारी तीर्थले लिनु पर्ने हुन्छ । नत्र खोला तरेपछि लौ बिर्सियो भन्ने नेपाल उखान ब्यवहारिक रुपमा लागु हुन्छ । किन भने शिव समूहको ठूलो तप्काले १४ औँ जिल्लामा अधिवेशनमा तीर्थलाई मतदान गरेर जिताएका छन् ।
यदि सह महामन्त्रीमा हुमागाई पराजित हुने अवस्था आयो भने जिल्लाको समीकरण थप तिरर वितर हुनेछ । अर्थात् शिव समूहले जिल्ला सभापति तीर्थ लामालाई नसघाउन सक्छ । यसको असर तीर्थले आफ्नो हरेक निर्णय गर्दा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर शिवलाई तीर्थले देउवा प्यानलबाट टिकट मात्रै दिएर जिताउन जिम्मा नलिएको पनि हुन सक्छन् ।
जुगलका चौरी पालक किसानलाई छुर्पी बनाउने मेसिन